ဖိုက်တင်ဂိမ်းကောင်းလေး Unreal Fighter v1.011a Apk
တွေ့ ရှိသမျှ သိထားသမျှ နည်းပညာတွေကိုမျှဝေပေး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
android games »
Posted by : ပုသိမ်နည်းပညာ Thursday, November 27, 2014
ဖိုက်တင်ဂိမ်းကောင်းလေး Unreal Fighter v1.011a Apk လေးပါ ကြမ်းကြမ်းရမ်းရမ်း တိုက်ခိုက်ဆော့ကစား
Unreal Fighter v1.011a Apk | 211 MB | Resumable Links | Requires : Android 2.3 and up |
Unreal Fighter puts you into the atmosphere, where everyone is waiting for retribution for their sins, and thirst for blood of the enemy, where the fights have no rules.
Fixed bug with Arcade.
You will be immersed in the game with unbelievable surroundings and excellent graphics.
In the Tutorial you have to go throughalot of terrible trials to defeat his own shadow, so you are familiar with the basic controls, then in Arcade mode will learn advantages martial skills of all of the fighters.
A unique new combat system will allow you for the first time fighting game, deal with the enemy, not only with different types of martial arts, but also the hard-break dance! Armed with an individual kind of battle, as well as your skills, your fighter has to fight, carrying out of their way each. Just in passing arcade mode, you will be availableasurvival mode where you will fight to the last breath.
In this game there is no any spending. Enough to buy once and play the full version without any additional in-app purchases.
Battles are waiting for you on multiple open spaces with high detail and colorful effects.
Great shaders graphic.
Cooperative play in BLUETOOTH.
Cinematic camera behavior that helps you feel more dynamic game.
Each fighter its stunning combination.
Cool soundtracks from the project “The Reptiles” from Cyril Skotnikov.
Two types of controls –aunique control system designed for the game, and all the usual management is on-screen virtual buttons as in the famous consoles PlayStation, Xbox, etc.
Download APK | OBB : Part1 PArt2
​ပေးထား​သော လင့်​ခ်​ အား Click နှိပ်​ပြီး Tab နောက်တစ်မျက်နှာရောက်လျှင် ၅ စက္ကန့် မျှစောင့်ကာ ညာဘက်ထိပ်နားက "SKIP AD"ဆိုတာကိုထပ်​မံ၍ Click နှိပ်​​ပေးလိုက်​လျှင်​မိမိ Down ယူရမည့်​ဆိုဒ်​သို့ ​ရောက်​ရှိမည်​ဖြစ်​သည်​။
Zaw Thwin Sex Blog
Facebook တွင် Like လုပ်၍အားပေးပါဦး
"ပြည်မြို့ကတုံးရဲ့လုံးတီးရာဇဝင်(အပိုင်း ၁)"✏ အချိန်ကား ညသန်းခေါင်ယံ ၃နာရီခွဲ …….ပြည်မြို့က ပုထိုးကြီးရပ်ကွက် တွင်ဖြစ်သည်…..။ပုန်းက...
✏ပြည်မြို့ ကတုံးရဲ့ လုံးတီးရာဇဝင်​(ဇတ်သိမ်းပိုင်း)✏ဇော်သွင်ဖာကောင်းရဲ့လက်​ရာသစ်​
“ဟေ့ကောင် စိုးကြီး လီးရစ်ရှည်မနေနဲ့တော့ လူတွေရောက်လာမှ လီးတွေဖြစ်ကုန်ဦးမယ်” ” အေးပါဆရာရယ်” ” မြန်မြန်ဖြုတ်လိုက်တော့ ပြီးရင်လစ်မယ်ဟေ့ကောင်”ေ...
✔ ၂လုံး၃လုံး ဝါသနာရှင်​များအတွက်​ Apk(for android)
နှစ်​လုံး သုံးလုံးထီ ဝါသနာပါသူ​တွေအတွက်​ ဒီ Apk ထဲက​နေ အလွယ်​တကူဝင်​ကြည့်​ လို့ရပါတယ်​။ တကွက်​​ကောင်းဂဏန်းရရင်​လည်း ​ပြောဗျာ။ ​ကျေး...
-facebook apk​တွေကိုofficalအပါအဝင်​ ​နောက်​ထပ်​apk(၄)ခုကိုမိမိဖုန်း​ပေါ်ကိုinstall လုပ်​၍၊apkတစ်​ခုကိုအ​ကောင့်​န်​တစ်​ခုခြင်းစီ log inလု...
မနက်​ဖြန်​​ ​အောင်​ဘာ​လေ ထီ ထွက်​မှာဆို​ ​တော့ ကိုယ့်​ဖုန်း​လေးထဲက​နေ အလွယ်​တကူ တိကျစွာ ထီတိုက်​လို့ရမယ့်​ "Myanmar Lottery" ...
အခုတင်ပေးမဲ့နည်းလေးကHuawei G610-U00တွေအတွက်Rootမလိုပဲမြန်မာဖောင့်သွင်းနည်းလေးပါ ကျွန်တော့်ကိုအကိုတစ်ယောက်မေးထားလို့တင်ပေးလိုက်တာပါဗျာ စ...
ဇော်သွင်ရဲ့ True Story
Facebookအ​ကောင့်​န်​disableဖြစ်​​နေတာကို reactivateပြန်​ယူပုံကိုအကျဉ်းချုံ့​ရေးလိုက်​ပါတယ်​။ Didableဆိုတာမိမိအ​ကောင့်​န်​ကိုfacebook ...
-ebookလေးမျှ ဝေပေးခဲ့ပါမယ်..hacking ebook pdf ပေါင်း၄၀ ရှာထားတာလေးတွေ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မည်သူကိုမျှမနှောက်ယှက်မိစေဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်​။ကျွန်ေ...
အားနေဘမ်းနေတဲ့ ငါလိုးမသားကြီး စောက်မှတ်မရှိသေးဘူးလား
♥ ♥ ချစ်​သူများ​နေ့ ဆိုတာ?♥ ♥ (1)
✔ Blood Zombies HD Mod v1.09 Game App for Android✔ (1)
✔ Photo Studio PRO v1.1.0 Latest Version for Android✔ (Feb:14th:2014 Updated) (1)
✔"​ဆော့ဖ်​ဝဲမြို့​တော်​"Facebook Page နှင့်​ Blogspot Apk v1.0 For Android✔ (1)
✔Cinema Movie HD for Android App✔ (1)
✔Color Splash Effect PRO v1.5.5 Full Pro Version App for Android (1)
✔Facebook Videos Downloader v13.3 Latest Updated for Android App✔ (1)
✔LAUNCHER 8 PRO V2.3.0 APP For Android (Feb:14th:2014 Updated)✔ (1)
✔Mobile DOC: Scanner(MD Scan)v2.0.43 Latest Updated Version for Android App✔ (1)
✔MPT Gadget Apk✔ (1)
✔MX Player PRO v1.7.24 Patched Latest Version App for Android(Feb:12th:2014 Updated)✔ (1)
✔One Tap Cleaner PRO v2.28 Latest Version for Android App(Feb:12th:2014 Updated)✔ (1)
✔RecForge II Premium - Audio Recorder v0.0.16g for Android App✔ (1)
✔Samsung Galaxy S4/S3/Note2 ဖုန်းများအတွက်​ IMEI ပြဿနာ ​ဖြေရှင်းနည်း✔ (1)
✔Smart Launcher Pro v2.0 Build 142 for Android App(February:15th:2014 Updated)✔ (1)
✔Subway Surfers v1.19.0 Mod APK Unlimited Money Keys for Android Game✔ (February:13th:2014 Updated Mod) (1)
✔System Contorl Pro v1.6.1 Latest Version forAndroid App✔ (Feb:13th:2013) (1)
✔Ultimate Guitar Tabs & Chordsv2.3.1 Full Version App✔ (February (1)
✔Valentine LockScreen Themes v1.0 App for Android✔ (1)
✔VPlayer Video Player v3.2.6 Latest Full Version for Android(February (1)
2014 Latest Updated) (1)
2014 Updated✔ (2)
၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက်ဗေဒင်ဟောစာတမ်း (1)
Account ဖွင့်နည်း (1)
Andriod Application (563)
Andriod launcher (47)
Android Firmwares (2)
android games (352)
Android root (4)
Android Screenshot Apk (1)
Android Tools (2)
Android ပြသနာ (1)
Bagan Keyboard (1)
Blogs Apk (1)
Blogspot နည်းပညာများ (56)
CWM ထည့်သွင်းနည်း (1)
Cydia Tweaks (1)
download Mananger (1)
http://www.zawthwin.wordpress.com မှာလည်းတင်ထားတယ်နော်… (1)
Huawei G610-U00အတွက်Rootမလိုပဲမြန်မာဖောင့်သွင်းနည်း (1)
Huawei Y535-C00 ကို Root စရာမလိုတဲ့ Myanmar Font (1)
ံHuawei ဖုန်းတွေအတွက်Secret Codeများ (1)
internet download mananger (10)
internet journal (16)
ios firmwares (1)
ios game (6)
ios ဆိုင်ရာ (1)
kaymu မြန်မာအွန်လိုင်းဈေးဝယ် (1)
Luckypatcher အသုံးပြုနည်း (1)
MMAS ROOT & FONT IMSTALLER (1)
mobile guide issue 138 (1)
mobile guide journal (1)
NetGuide Journal (1)
Networking Tools (2)
Note2 Version4.3 မြန်မာစာပါတဲ့"ထိုင်း"ဖန်းဝဲ (1)
Note3 N-9005 မြန်မာစပါတဲ့ ဖန်းဝဲ (1)
PC software (74)
S4 S3 Note2 အတွက်​ IMEI Code ပြန်​ထည့်​နည်း (1)
Service သမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ Andriod နှင့်ပတ်သက်၍ သင်ဒါတွေ သိပီလား (1)
Super Backup.apk (1)
Upload & Download (1)
Version 4.2.1ကိုGoogle Play Storeသွင်းနည်း (1)
Viber Contant Photo Sync.apk (1)
Viber. Skype.Tango.Phone ရဲ့အသံဖမ်းပေးမဲ့Steady Call Recorder (1)
video edit software (1)
Vroot Apk (1)
WiFi Password Recovery_1.1.apk (1)
Win rar (2)
Yandex Mail (1)
ငရဲကြီး ၈ ထပ် နှင့် ၃၁ ဘုံ APK (1)
ဖုန်းပါဝါခလုတ်တွေပျက်မှာဆိုး၇င်အော်တိုဖုန်းကိုဖွင့်ပေးမဲ့Auto Screen On (1)
ဘဏ် apk များ (1)
ဖေ့ဘွတ်မှာ လော့ခ်ကျနေတဲ့အကောင့်န်ပြန်ယူနည်း (1)
▼ 2014 (1784)
✔Cartoon Photo v1.14(updated)✔
500Watt Inverter & Charger
✔Knockr-v2.0 Apk (for android)✔
facebook ID Card လုပ်နည်း
500Watt Inverter Design
✔"Photo Math App v1.1.1" (for iphone and windows p...
ဓာတ်ပုံတွေ ဖုန်း မှာပိုလှအောင်ရိုက်ပေးနိုင်တဲ့ XnI...
စနိုက်ဘာဂိမ်းကောင်းလေး Sniper 3D Assassin Mod APK ...
ကားပြိုင်ဂိမ်းအလန်းလေး Race Team Manager Mod APK U...
စာအုပ်တွေ pdf တွေကိုဖုန်းမှာအလွယ်ကြည့်နိုင်မဲ့ Moo...
facebook အကြောင်းငိကောင်းစရာ pdf
facebook အကြောင်း သိကောင်းစရာများ pdf
မန်​ယူ zawgyi Keyboard pro ​လေးပါ
Over Voltage Alarm Circuit
Automatic Light Contril Circuit
ဗီဒီယိုတွေကို ၇ုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်...
ဖုန်းမှာချိတ်ဆတ်သုံးနိုင်တဲ့ လျှုိ့ဝှက်ကင်မရာဆော...
ဖုန်းကလိပြု ပြင်တဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် SuperSU Pro v2.3...
အသုံးဝင်တဲ့ Root Explorer v3.3 Apk
✔YouTube Downloader 4.8.4.7 Full For PC Version✔
ဖုန်းမှာဒေါင်းလုတ်အမြန်ဆွဲနိုင်တဲ့ IDM Fast Downlo...
ဖုန်းမှာ Screenshot ရိုက်ပေးမဲ့ Screenshot Ultimat...
ဘရုစ်စလီ ဖိုက်တင်ဂိမ်းလေး Bruce Lee: Enter The Gam...
ကွမ်းအင်ဖိုက်တင်ဂိမ်းကောင်းလေး Destiny War Mod APK...
ဒီဇိုင်းအလန်းလေး Aurora 3D Live Wallpaper v2.0 Apk...
✔PhotoMath App က သင်္ချာအိမ်​စာများကို တွက်​ချက်​​ပေ...
✔Cartoon Photo v1.13✔(for android)
✔ကွန်​ပျူတာ​ကြောင့်​ အမြင်​အာရုံမထိခိုက်​ရ​ ​လေ​အေ...
✔Facebook Group v2.0.0(android)✔
ဖုန်းအားအမြန်ဝင်စေတဲ့ဆော့ဝဲကောင်းလေး Battery Saver...
ခရစ်စမတ်ကိုကြို ဆိုဖို့ Christmas 3D Live Wallpape...
movie တွေရုပ်ထွက်ကောင်းကောင်းကြည့်ရှုနိုင်တဲ့ HD Vi...
ဖုန်း ဒိုင်ယာရီစာအုပ် ဆော့ဝဲလေး Private DIARY v7.3...
✔Advanced Download Manager Pro v4.0.1 Apk✔
လူကြို က်များတဲ့ MX Player Pro v1.7.32 Apk
✔သင့်​ရဲ့ Android Device ကိုအသုံးပြုရာမှာ မြန်​ဆန်...
✔Facebook Offical v22.0.0.15.13✔
✔Free download applications and games for "iOS 7.1...
တချက်ကလစ်ရုံနဲ့ ဖုန်းမှာလေးနေတာတွေရှင်းလင်းပေးမဲ့ ...
ဖုန်းမှာသွေးခုန်နှုန်းတိုင်းလို့ရတဲ့ Instant Heart ...
မိမိဖုန်းကိုသူများတွေ မသုံးရအောင် lock ချထားပေးမဲ့...
ညပိုင်းကောင်းကင်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့လှနေတဲ့ Night Sky Li...
2015 ဘောလုံးမန်နေဂျာဂိမ်းလေး Football Manager Hand...
FIFA 15 Ultimate Team v1.2.0 Apk
✔Flash Notification(2) v3.17✔
✔Android Version 2.3.3 ကနေ 5.0 ထိ 1 Click မြန်မာစာ...
ဖုန်းမှာသွေးပေါင်ချိန် တိုင်းလို့ရတဲ့ဆော့ဝဲလေး Ins...
ဖုန်းမှာဓာတ်ပုံတွေအလွယ်တကူပြု ပြင်နိုင်တဲ့ Photosh...
Game နဲ့ application များကို full version ဖြစ်အောင...
BusyBox Pro v19 Apk
ဖုန်းတွေကို ဗိုင်းယပ်မ၀င်အောင်ကာကွယ်ပေးမဲ့ Securit...
ဖုန်းအား ၂ဆ အမြန်ဝင်စေတဲဆော့ဝဲလေး 2x Battery Pro –...
Music တွေကောင်းစွာနားဆင်နိုင်မဲ့ Equalizer + Pro (...
နောက်ဆုံးပေါ် KK Launcher Prime (Lollipop &KitKat) ...
ဖုန်းမှာပုံတွေအလွယ်ပြုပြင်နိုင်တဲ့ Pho.to Lab PRO ...
စနိုက်ဘာဂိမ်းကောင်းလေး Mountain Sniper 3D FPS Mod ...
ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်က Flash မီးလေးက တဖျတ်ဖျတ်နဲ့အသိလေး...
ခိုးရိုက်လို့ရတဲ့ကင်မရာလေး Mobile Hidden Camera
ပေါ်ပျူ လာဒီဇိုင်းအလန်းလေး Audax – Icon Pack v2.7 A...
Root တွေကိုရှင်းလင်းပေးမဲ့ Root Cleaner v3.4.1 Apk...
ဝေဟင်ကနေတိုက်ခိုက်ဆော့ကစားရမဲ့ဂိမ်းလေး Choplifter ...
✔Facebook Group v1.0.0(android)✔
ဖုန်းမှာဒေါင်းခြင်တာ အလွယ်ဒေါင်းဖို့ µTorrent® Pro...
✔Basic Start Using On Facebook✔
ဖုန်းထဲမှာပြောသမျှ မှတ်သားထားပေးမဲ့ Call Recorder ...
သီချင်းတွေကောင်းစွာနားဆင်နိုင်မဲ့ Music Playerကောင...
ဖုန်းထဲက ဂိမ်းတွေ app တွေ SDကဒ်ထဲရွှေ့ပေးမဲ့ Link2S...
✔Website ရေးသားခြင်းဆိုင်ရာ စာအုပ်များ Web Essenti...
✔Cooler Master v1.0.4 Apk✔
✔Huawei Ascend P6 မှာRootလုပ်​ပြီး Custom CWM Rec...
လူတိုင်းကြိုက်တဲ့ Next Launcher 3D Shell v3.20.2 A...
စာအုပ်တွေ pdf ဖိုင်တွေဖုန်းမှာ အလွယ်တကူဖတ်နိုင်တဲ့...
ဖုန်းအားအမြန်ဝင်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးမဲ့ DU Battery Sa...
ဖုန်းဘက်ထရီအား အမြန်ဝင်စေတဲ့ Smart Battery Saver
ရေခဲပြင်ဟော်ဂီ ဂိမ်းလေး NHL 2K v1.0.2 Apk
✔Myanmar Ghost Story Offline v1.3 Apk✔
✔CM Browser v5.1.8 Updated✔
ဖုန်းဘက်ထရီအားကြာရှည်ခံစေတဲ့ Battery Saver Pro v2....
ဖုန်းမှာ Music တွေကောင်းစွာနားဆင်နိုင်မဲ့ jetAudio...
Netguide Journal Vol. (3) , Issue (60)
Facebook Version အားလုံးမှာ Video တွေအလွယ်ဒေါင်းယူ...
အင်တာနက် speed ကိုပိုမြန်စေမဲ့ Internet Cyclone 2....
ကျော်မယ်ခွမယ် Globus VPN Browser 28.0.2.7 (PC Onl...
ဒီဇိုင်းအလန်းတွေနဲ့ Pop UI – Icon Pack v1.9 Apk
Remix သံစဉ်တွေကြည်လင်စွာနားဆင်နိုင်တဲ့ Music Playe...
Launcher အလန်းလေး MIUI6– Launcher Theme v2.2 Apk...
ရေခဲပြင်ဟော်ဂီ ဂိမ်းလေး Stickman Ice Hockey Mod AP...
နည်းပညာတွေလေ့လာမယ် ရှာဖွေမယ်။တွေ့ ရှိသိရှိထားတာတွေကိုပြန်လည်ဝေမျှပေးမယ်။
- Copyright © ကိုဇော်သွင်(စန္ဒယားနှင့်ကီးဘုတ်) -Metrominimalist- Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -